MISSION S.O.S : Hanasitrana ny nofo, hitaiza ny fanahy. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MISSION S.O.S : Hanasitrana ny nofo, hitaiza ny fanahy.
MISSION S.O.S : Hanasitrana ny nofo, hitaiza ny fanahy.
By Nirinajuin 20, 2017, 22:20 0
Tonga eto Madagasikara ny MISSION S.O.S izay tarihan’i pasitera Johannes Amritzer. Miisa 300 izy ireo ka ahitana mpitsabo sy ireo mpitory ny filazan-tsara. Hisy ny hetsika fitoriana an’Andriamanitra mandritra ny 5 andro hanomboka ny Alarobia 21 jona 2017 ka hifarana ny Alahady 25 Jona 2017 etsy amin’ny kianjan’Alarobia. Samy hanomboka amin’ny 2 ora sy sasany ny fotoana. Ankoatra ny fitoriana dia hisy ny rindran-kiram-piderana izay ahitana an’i Rija RASOLONDRAIBE, Joseph Daf, Antsa ny Kristy, Rija Rakoto, Julia Willkander. Renivohitry ny firenena maro taty Afrika no efa nanaovan’izy ireo hetsika fitoriana toy izao ka anjaran’Antananarivo renivohitr’i Madagasikara indray ny amin’ity herinandro ity. « Tsy hanavahana antokom-pinoana ity hetsika ity », hoy ny tomponandraikitra. Manentana ny Malagasy tsy ankanavaka noho izany ny MISSION S.O.S ho tonga eny amin’ny kianjan’Alarobia amin’ireo fotoana voalaza ireo fa haneho fahagagana ny Tompo. « Hanasitrana an’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy Izy satria nirahan’Andriamanitra izahay hanatanteraka izany ». Ity hetsika ity dia iarahan’izy ireo amin’i FIMPIFIMA ( Fiombonan’ny Mpitory ny Filazan-tsara eto Madagasikara )
Nomarihan’izy ireo fa tsy misy ny vidim-pidirana fa ny fahatongavanao dia zava-dehibe ho an’Andriamanitra satria te-hikasika ny fonao izy.
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-1.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-1.jpg »] MISSION S.O.S [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-3.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-3.jpg »] MISSION S.O.S [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-4.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-4.jpg »] MISSION S.O.S [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-7.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/06/MISSION-SOS-7.jpg »] MISSION S.O.S [/image_slider]
Previous PostSG SYGMMA: Iharan’ny fampihorohoroana ny vadiny aman-janany. Next PostFORCES DE CHANGEMENT: « Mitaona ny vahoaka hanohitra ny fitondrana ».